Mid ka mid ah xidigaha Barcelona oo xabsi lagu xukumay. | Somali National Television - sntv.so
Home CIYAARAHA Mid ka mid ah xidigaha Barcelona oo xabsi lagu xukumay.
Mid ka mid ah xidigaha Barcelona oo xabsi lagu xukumay.
Waxaa lagu helay dembi ah inuu cisbitaalka dhexdiisa ka abuuray argagax, haysashada qori sharci daro ah iyo inuu si ulakac ah qof u dhaawacay.
Dhacdadu halkaas kuma aysan dhammaan. Turan wuxuu ka soo muuqday isbitaalka isaga oo sita qori isla markaana cafis dalbanaya wuxuuna bartiisa tweeter-ka ku qoray inuu khalad galay, kooxdiisa iyo qoyskiisana uu ka dalbanayo cafis.
Previous articleGuddoomiyaha Maxkamadda Sare JFS Dr Baashe Yuusuf Axmed oo soo xiray imtixaanka kaaliyeyaasha.
Next articleGeneraal Zakiya “CID waxaa ay soo qabatay shabakad ka ganacsata caruurta.